SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Chimwe chizvarwa chinoenda, uye chimwe chizvarwa chinouya; asi nyika inogara iripo nokusingagumi.”—MAMBO SOROMONI, WEMUISRAERI YEKARE. *
Munyori uyu weBhaibheri akararama kare, akaona kuti nyika inoramba iripo nokusingaperi asi vanhu vanongorarama kwemakore mashomanana. Zvechokwadiwo, papfuura zviuru zvemakore chimwe chizvarwa chichiuya uye chimwe chichienda, asi nyika iri kuramba iripo ichitoita kuti zvinhu zvipenyu zvirambe zvichirarama.
Zvinhu zvachinja zvazvisati zvamboita kubvira pakaitika Hondo Yenyika Yechipiri. Mumakore anenge 70 apfuura, zvinhu zvakavandudzwa zvikuru panyaya dzezvekufambisa, nzira dzekutumirana mashoko, uye ruzivo rwekugadzirwa kwezvinhu, izvo zvachinja mamiriro ezvoupfumi munyika zvaisambofungidzirwa. Vakawanda vava neupenyu hwaimbonzi hahukwanisiki. Ukuwo, vanhu vawanda zvakapetwa katatu kubva pakaitika hondo yenyika yechipiri.
Asi zvose izvi zvakakanganisawo zvimwe zvinhu. Zviri kuitwa nevanhu zvinonzi zviri kukuvadza nyika zvokuti zvinhu zvakasikwa zvinotsigira upenyu zvichaguma zvisisashandi zvakanaka. Mamwe masayendisiti akatotaura kuti mumazana mashomanana emakore apfuura, vanhu vakawedzera kuparadza nyika.
Bhaibheri rakagara rataura kuti vanhu ‘vaizoparadza nyika.’ (Zvakazarurwa 11:18) Vamwe havana chokwadi kana nguva yatiri kurarama iri iyo yaitaurwa nezvayo. Nyika ino ichawedzera kuparadzwa kusvika papi? Ichasvika pokuti haizogadzirisiki here? Vanhu vachaiparadza zvachose here?
ICHASVIKA POKUTI HAIZOGADZIRISIKI HERE?
Nyika ino ichasvika pokuti haizogadzirisiki here? Mamwe masayendisiti anoti kuchinja kwezvinhu kuri kuita kuti zviome kuziva kuti zvichaguma nei. Izvi zvinoita kuti vafungidzire kuti mamiriro okunze achangoerekana achinja zvokuti achawondonga zvinhu zvakawanda.
Chimbofunga nezvechando chiri kumadokero kweAntarctic. Vamwe vanofunga kana kunze kukaramba kuchiwedzera kupisa, chando ichi chinogona kuramba chichinyunguduka, zvokuti mvura yacho haizovizve chando. Vanodaro nokuti chando ichi chagara chichifukidza mvura yegungwa kuAntarctic kuti isarohwa nezuva. Asi chando ichi pachinenge chichinyunguduka, zuva rinoguma rava kunyatsorova mvura yegungwa. Rima rinenge riri pasi pegungwa rinoita kuti zuva riwedzere kudziya kwemvura, zvoita kuti chando ichi chiwedzere kunyunguduka. Izvi zvinogona kuramba zvichiitika, zvozokonzera kuti mvura iwande mumakungwa zvokuti upenyu hwevanhu vakawanda hunova pangozi.
NYIKA IRI KUWEDZERA KUSAKADZWA
Pane mazano akasiyana-siyana ari kufungwa nevanhu ezvavangaita kuti vagadzirise matambudziko ekuparara kuri kuita pasi. Rimwe zano rava nenguva richishandiswa nderokukurudzira vanhu kuti vasashandise zviwanikwa kupfuura zvinokwanisa kugadzirwa nenyika. Zano iri rakabatsira here?
Zvinosuwisa kuti nyika iri kungowedzera kuparadzwa. Vanhu vari kuramba vachishandisa zviwanikwa kupfuura zvinokwanisa kugadzirwa nenyika pachayo. Chii chingapedza dambudziko iri? Mumwe muongorori anoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa akati: “Tingangoti, hatizivi kuti tingaita sei kuti tichengetedze pasi rino.” Izvi zvinonyatsoenderana nezvinotaurwa neBhaibheri kuti: “Munhu anofamba haakwanisi kudzora nhanho dzake.”—Jeremiya 10:23.
Asi Bhaibheri rinotiratidza kuti Mwari, anova ndiye Musiki, haasi kuzobvumira vanhu kuparadza zvinhu zviri panyika zvachose. Pana Pisarema 115:16 panotaura nezvaMwari kuti: “Nyika akaipa vanakomana vevanhu.” Zvechokwadi, nyika ‘chipo chakanaka’ chinobva kuna Baba vedu vokudenga. (Jakobho 1:17) Tingati Mwari akangotipa chipo ichi kuti tive nacho kwenguva pfupi here? Kana! Izvi tinozviona patinoongorora masikirwo akaitwa nyika.
Bhuku reBhaibheri raGenesisi rinotiudza zvakawanda nezvekusika kwakaita Mwari nyika. Pakutanga, nyika “yakanga isina kugadzirwa, isina chinhu,” uye “rima rakanga riri pamusoro.” Asi rinotaurawo kuti panyika paiva ‘nemvura,’ iyo inokosha kuzvinhu zvose zvipenyu. (Genesisi 1:2) Mwari akabva ati: “Chiedza ngachivepo.” (Genesisi 1:3) Zviri pachena kuti chiedza chezuva ndopachakatanga kusvika panyika. Zvadaro tinonzwa nezvekugadzirwa kwenyika yakaoma uye makungwa. (Genesisi 1:9, 10) Tinozonzwawo, nezvekuvapo ‘kweuswa, zvinomera zvinobereka mbeu nemiti inobereka michero.’ (Genesisi 1:12) Saka zvinhu zvinodiwa kuti zvinhu zvipenyu zvirambe zvichirarama zvakanga zvavapo. Zvose izvi zvakaitirwei?
Muprofita Isaya akati Mwari ndiye “Muumbi wenyika noMuiti wayo, iye akaisimbisa kwazvo, asina kungoisikira pasina, akaiumba kuti igarwe.” (Isaya 45:18) Zviri pachena kuti chinangwa chaMwari ndechokuti nyika igarwe nevanhu nariini.
Zvinosuwisa kuti vanhu vari kuparadza chipo ichi chakanaka chatakapiwa naMwari. Asi chinangwa cheMusiki hachina kuchinja. Mumwe murume akararama kare akati: “Mwari haasi munhu zvokuti angareva nhema, uyewo haasi mwanakomana womunhu zvokuti angazvidemba . . . Iye akataura, haangazviiti here?” (Numeri 23:19) Chokwadi, pane kuti asiye nyika ichiparadzwa, nguva iri kuramba ichiswedera pedyo yokuti Mwari ‘aparadze vaya vanoparadza nyika.’—Zvakazarurwa 11:18.
NYIKA NDIWO MUSHA WEDU NARIINI
Jesu Kristu akataura mumharidzo yake yakakurumbira yepagomo kuti: “Vanofara vanyoro, nokuti vachagara nhaka yenyika.” (Mateu 5:5) Mumharidzo iyoyo, Jesu akazoratidza kuti zvichaitika sei kuti nyika irege kuparara. Akadzidzisa vateveri vake kunyengetera kuti: “Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika, sezvakunoitwa kudenga.” Zvechokwadi, Umambo hwaMwari, kana kuti hurumende yaMwari, ndiyo ichazadzisa chinangwa chaMwari chaakasikira nyika.—Mateu 6:10.
Mwari anotaura nezvekuchinja kukuru kwaachaita zvinhu achishandisa Umambo achiti: “Tarirai! Ndiri kuita kuti zvinhu zvose zvive zvitsva.” (Zvakazarurwa 21:5) Izvi zvinoreva here kuti Mwari achaparadza nyika iripo osika imwe? Kwete, nokuti nyika pachayo haina kuipa. Asi Mwari achaparadza vaya vari kuikanganisa, “vaya vanoparadza nyika,” kureva hurumende dzevanhu dziri kutonga iye zvino. Dzichatsiviwa ‘nedenga idzva nenyika itsva.’ Denga idzva ihurumende yakagadzwa kudenga, kureva Umambo hwaMwari, uye ichatonga vanhu vanoteerera vanenge vari panyika.—Zvakazarurwa 21:1.
Kuti Mwari agadzirise kuparadzwa kuri kuitwa nyika, achadzorera zvose zviri kuparadzwa nevanhu. Achitsanangura zvichaitwa naMwari, munyori wepisarema akafemerwa kunyora kuti: “Makafunga nezvenyika, kuti muipe zvinhu zvizhinji; munoipfumisa kwazvo.” Nyika ichava paradhiso, ichibereka zvekudya zvakawanda nokuti kuchange kuine mamiriro ekunze akanaka uye Mwari achange achiikomborera.—Pisarema 65:9-13.
Pyarelal, uyo aiva munyori wemushakabvu, Mohandas Gandhi, akati mutungamiriri uyu wechitendero wokuIndia akambotaura kuti: “Nyika inokwanisa kuwanisa vanhu vose zvinovakwanira asi haikwanisi kugutsa makaro evanhu.” Sezvo matambudziko ari panyika achitangira mumwoyo yevanhu, Umambo hwaMwari huchaita kuti vanhu vachinje mafungiro avo. Muprofita Isaya akataura kuti kana Umambo hwava kutonga, vanhu ‘havazombokuvadzi kana kumboparadza’ vamwe vavo kana kuti nyika. (Isaya 11:9) Mazuva ano panotova nemamiriyoni evanhu vanobva kwakasiyana-siyana vari kudzidza nezvaMwari. Vari kudzidziswa kuda Mwari uye muvakidzani, kuva vanhu vanoonga, kubatsira pakuita kuti nyika irambe yakanaka, kuchengetedza zviwanikwa, uye kurarama vachitsigira chinangwa chakasikira Mwari nyika uye vanhu. Vari kubatsirwa kugadzirira kuzorarama munyika ino painenge yava paradhiso.—Muparidzi 12:13; Mateu 22:37-39; VaKorose 3:15.
Zvechokwadi, nyika ino haisi kuzombofa yakaparara zvachose
Nhoroondo yokusika iri muna Genesisi inopedzisa nemashoko okuti: “Mwari akaona zvinhu zvose zvaakanga aita uye, tarira! zvakanga zvakanaka kwazvo.” (Genesisi 1:31) Zvechokwadi, nyika ino yakanaka haisi kuzombofa yakaparara zvachose. Zvinotinyaradza kuziva kuti ramangwana renyika riri mumaoko eMusiki wedu ane rudo, Jehovha Mwari. Anovimbisa kuti: “Vakarurama vachagara nhaka yenyika, vachagara mairi nokusingaperi.” (Pisarema 37:29) Wadii kuvawo pakati ‘pevakarurama’ vachazodana nyika kuti ndiwo musha wavo nariini?
^ ndima 3 Kubva muBhaibheri pana Muparidzi 1:4.
Kukanganisa Kuri Kuita Vanhu Nyika
Mhepo Yakaputira Nyika. “Pane uchapupu hwakasimba hwekuti mhepo yatiri kufema, makungwa uye nyika zviri kuwedzera kudziya . . . Kubvira kuma1950, vanhu ndivo vari kunyanya kukonzera izvi.”—American Meteorological Society, 2012.
Nyika. “Ingasvika hafu yenyika yose yakachinjwa nevanhu, zvikakanganisa marudzi akasiyana-siyana emhuka nemiti uyewo kukura kwemiti ichishandisa manyowa anogadzirwa nemashizha ayo, . . . pamwe nemamiriro ekunze.”—Global Change and the Earth System.
Makungwa. “Inenge 85 muzana yemunzvimbo dzinobatwa hove munyika yose, muri kubatwa hove zvakapfurikidza, masara hove shomanana, kana kuti dziri kuwedzera kubva pakutapudzwa kwadzanga dzaita.”—BBC, September 2012.
Marudzi Akasiyana-siyana Emiti Nemhuka. “Masayendisiti akawanda anofunga kuti . . . vanhu ndivo vachakonzera [kutsakatika kwemarudzi akawanda emiti nemhuka]. Anoti izvi zvinogona kuitika nokukurumidza kupfuura zvati zvamboitika.”—Kubva pascience.nationalgeographic.com.
Sezvakataurwa neNASA, nzvimbo inokwanisa kugarwa nezvinhu zvipenyu panyika pano iduku.
Nzvimbo iyi ine zvinhu zvinoita kuti zvipenyu zvose zvirambe zvichirarama zvinoti: nyika nemhepo yakaiputira uye makungwa. Somuenzaniso miti inogadzira mhepo yatinofema (oxygen), uye inokura ichishandisa chiedza chezuva, mhepo inonzi carbon dioxide, mvura nezvimwewo zviri muvhu. Vanhu nemhuka zvinowana zvekudya nemhepo yekufema kubva kumiti. Miti inowanawo carbon dioxide nemupfudze kubva kuvanhu nemhuka. Izvi zvinoramba zvichiitika, zvoita kuti zvinhu zvipenyu zvirambe zvichirarama.
Ndokusaka Mwari achinzi ndiye akasimbisa “kwazvo nyika inobereka nouchenjeri hwake.” (Jeremiya 10:12) Sezvakataurwa nemumwe muongorori weBhaibheri, “chikamu chenyika chinoita kuti zvinhu zvipenyu zvikwanise kurarama chakanyatsokodzera chaizvo kugarwa nevanhu.”
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Vanhu Vachaparadza Pasi Rino Zvokusagadzirisika Here?
NHARIREYOMURINDI Vanhu Vachaparadza Pasi Rino Zvokusagadzirisika Here?